Materiality - First Myanmar Investment Public Company Limited
FMI ၏ ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရန် ဟူသော ရည်မှန်းချက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာကို အသုံးချစရာ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ ရှုမြင်ချက်ကို အသုံးချ၍ ရေရှည် ကောင်းမွန်သော တန်ဖိုးများကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက်များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ ထိုသို့ ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးစီးပွား သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးအတွက် ပိုမို အကျိုး ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည့်အလျောက် အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှု စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ကျင့်ဝတ် များ၊ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတို့အပေါ် အလေးထား လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု မူဘောင်အောက်တွင် FMI ရုံးချုပ်သည် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများအား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီး များ ထောက်ပံ့ ပေးပါသည်။ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသော လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ အား အရေးကြီးသော ESG အချက် အလက် များ ဖြစ်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး နှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ် လျက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ၊ ဥပဒေ လေးစားလိုက်နာမှု ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်း ဆောင်ရည်၊ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမှု နှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု၊ မတူကွဲပြားမှု နှင့် ဒေသခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ဟူသော အချက် ၆ ခုဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်အား အကဲဖြတ် စစ်ဆေးပါသည်။
FMI ကုမ္ပဏီ၏ အဓိက အကျိုးပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် ပြည်သူများကို အကျိုးပြုနိုင်ရန် သူတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို တက်ကြွစွာ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ဝန်ဆောင်မှု စံချိန်စံညွှန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံမျှမက တည်ထွင်ဆန်းသစ်မှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ ထက်မြက်သောဝန်ဆောင်မှု၊ လူမှုရေးတာဝန်ကျေပွန်မှု များကို တိုးတက်စေလျှက်ရှိပါသည်။
We ensure that our shareholder’s values are aligned with the entire supply chain – focusing on market opportunities, innovation, sustainability, and corporate responsibility.
Our sustainability strategy focuses on the monitoring and evaluation of our businesses in six key areas – Anti-corruption, Legal Compliance, Environment, Employee Training and Development, Diversity, and Local Communities – intended to integrate the significant ESG impacts of their operations.
Zero cases of corruption, fraud or bribery reported.
Zero cases of fraudulent behaviour reported.
Employee skills, training and development
The Group is consistently providingarange of development programmes every3months.
Through “Generation Equality: Action Against Harassment at Work” campaign , more than 50% of managers from the company has participated the training on anti-harassment on 10th Dec 2019.
CSR and Sustainability committees
The Company has achieved volunteer2hours per employee in FY Sep2019 through different activities.